Web Design & development Services | Myanmar Web Store
# Web Design & development Services
Websiteဘာကြောင့်ပြုလုပ်သင့်လဲ မပြောခင် ကျွန်တော်တို့ Myanmar Web Store၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ……
✅ကျွန်တော်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံရှိ Small, Medium, Large Business များအားလုံး Web Address (Website) ရှိစေရန်နှင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်သက်သာပြီး အရည်အသွေးအဆင့်တန်းမှီအောင် စိတ်ရင်းစေတနာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဗျ 💯
အခု Smartphoneတွေဖြစ်တဲ့Digital Deviceတွေပေါများလာတဲ့ Digital ခေတ်ကြီးမှာ Offline Marketingနဲ့ဆက်သွားနေတုန်းပဲလား လူတိုင်းမိုးလင်းမိုးချုပ်အိပ်ယာ ဝင်ချိန်ထိ SmartPhoneကို ကိုင်တွယ်နေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက မိုးလင်းမိုးချုပ်ထိ လူတိုင်းနဲ့အတူ Onlineမှာရှိနေဖို့ လိုအပ်လာပြီး Digital Marketingကို ချဲ့ထွင်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီဗျ
လူတိုင်းက Facebookကို သုံးနေကြပြီ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျ Facebookမှာလည်းMarketingလုပ်နေတာပဲ လေ…….
🗝ဒါဆိုရင် လူတိုင်းက Facebookကို သုံးကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေမယ်ဆိုရင် Search Engineဖြစ်တဲ့ Googleမှာရှာဖွေကြတယ်ဆိုတာသတိပြုမိရဲ့လားဗျ👌
ဒီတော့ လူကြီးမင်းရဲ့လုပ်ငန်းက အကြောင်းအရာတွေ ရှာဖွေတဲ့လူတွေကို Marketingပြုလုပ်နိုင်ဖို့ Search Engineဖြစ်တဲ့Googleမှာနေရာယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျ…
✅ဒါဆိုလူအများက Google ခေါက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းအကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပြီးလူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းနှင့် Potential Customerတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတရပ်ဖြစ်ပါတယ်
Google ရဲ့ Search Engine စာမျက်နှာများမှာနေရာယူနိုင်ဖို့ အဓိကနဲ့ ပထမဆုံး လိုအပ်တာက Websiteဖြစ်ပါတယ်ဗျ…….
အကြောင်းအရာရှာဖွေတဲ့လူတွေရဲ့ Google Search Engineမှာ Marketing ပဲလုပ်လုပ် SEOပဲလုပ်လုပ် Websiteရှိမှ ကိုယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်အောင် Search Engineမှာ mareketingပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ဒါကြောင့် Websiteပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ကျွန်တော်တို Myanmar Web Store ကပြုလုပ်ပေးသော #Premium အဆင့်ရှိသော Website Design များဖြင့်ပြုလုပ်လိုက်ပါ 💬💬
Websiteပြုလုပ်မည်ဆိုပါက #Package များဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်တာဖြစ်လို့
– Myanmar Web Store ၏ Facebook Page Messenger 💬
-Email 📩 hello@myanmarwebstore.com
-Phone ☎ 09 979 959994
✅ကျွန်တော်တို့ဆီ Website ပြုလုပ်ပါက လူကြီးမင်းတို့၏ Websiteတွင် ဘာတွေဖော်ပြနိုင်မှာလဲ ✅
👉Home Page: home page သည် မိတ်ဆွေတို့ Website ကို ဖွင့်လိုက်တာနှင့် ပထမဆုံး မြင်တွေ့ရမည့် စာမျက်နှာ ဖြစ်သည်။ ထိုစာမျက်နှာတွင် မိမိတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဆောင်ပုဒ်များ၊ Customers များသည် မိမိတို့အတွက် အရေးပါပုံများ အစရှိသဖြင့် စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
👉Product / Service ( pricing ) မိတ်ဆွေတို့ ကုမွဏီတွင် Products ပစ္စည်းများ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများရှိလျှင် ထိုပစ္စည်းများ အကြောင်း၊ နမူနာ ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
👉About pages : မိမိတို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ မိမိတို့ ကုမွဏီဘယ်အချိန်က တည်ထောင်ခဲ့လဲ။
👉Meet the staff page : မိမိတို့ ကုမ္ပဏီတွင် ဘယ်လို လူတွေတာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်နေလဲ။ မိမိတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ partner ကုမ္ပဏီတွေက ဘယ်company တွေလဲ။ ( staff တွေရဲ့ Activities တွေ photo တွေထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ပါသည်။)
👉FAQs pages : Customers များမှ မေးထားသော မေးခွန်းများ နှင့် customers များအတွက် လိုအပ်သည် ဟုထင်သော အမေးအဖြေပြုလုပ်ထားသော မေးခွန်းများ။
👉Sitemap : မိမိWebsiteအညွှန်းMenuများ (ဒါ့အပြင်မိမိတို့၏ လိပ်စာကို မြေပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြနိုင်ခြင်း)
👉Social Media links : မိမိတို့ Company တွင် အခြား links များရှိလျှင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း Example linked in , Facebook , Twitter, etc…..
Myanmar Web Store က Web Design & Development services အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော website package များကို အောက်ပါ link တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
View Our Packages => https://myanmarwebstore.com/pricing/
Myanmar Web Store ကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက် website တွင်ရှိသော contact page မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်သလို Myanmar Web Store ၏ https://www.facebook.com/myanmar.webstore/ Facebook Page ကနေလည်းဆက်သွယ်လိုရပါတယ်ဗျ။